‘मैले एक बर्षका लागि हस्तमैथुन छाडेको थिएँ’ मलाई के कस्ता लाभ मिल्यो ? - Sidha News
आफ्ना साथीसँग मैले मनको गाँठो फुकाइन । नितान्त व्यक्तिगत कुरा गर्ने चलन थिएन, साथीसँग ।
जब म २० औं जन्मदिन मनाइरहेको थिएँ, त्यसबेला म मनमनै एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको थिएँ, अबदेखि हस्तमैथुन गर्ने छैन ।
यो निकै जटिल निर्णय थियो ।
मेरी आमा आध्यात्मिक पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो, म लुकाएर उनको पुस्तक पढ्थें । म ध्यान गर्न थालें । यसले यौन क्रियाकलापमा संयम हुन सिकायो । आत्माविश्वास बढाइदियो ।
कुन्डलिनी जागरणसँग हस्तमैथुनको सम्बन्ध
यो एक प्राचिन धारणा कुन्डलिनीसँग जोडिएको छ । म आफ्नी आमासँग यी सबै प्रश्न राख्नुअघि निकै लजाएको थिएँ ।
तर, म अब थप जान्न चाहन्थें ।
सुरुवातमा मलाई लाग्यो कि, अब पुरा जिन्दगीमै हस्तमैथुन गर्न छाड्ने फैसलाले म सुरुमा निरास पनि थिएँ । तर, त्यसपछि मैले आफ्नो लागि असल लक्ष्य बनाउन सुरु गरें ।
नोफाप आन्दोलनले ९० दिनसम्म हस्तमैथुन नगर्न वाकलत गर्छ । मैले यसको बारेमा पहिलो पटक एक टेड टकमा सुनेको थिएँ, जसले पोर्नले दिमागमा पर्ने असरबारे थियो । यसमा पोर्नको लत र लागुऔषधको लत एकै किसिमको हो भन्ने तर्क थियो । यसका साथै पोर्न सामाग्रीको आशक्तिले पुरुष यौनाङ्गमा समेत असर पर्ने बताइएको थियो ।
म जुन हिसाबले आफुलाई परिवर्तन गर्ने कोसिसमा थिएँ, ठिक त्यसैगरी इन्टरनेटमा युवाहरुको अभियान छेडिएको रहेछ । उनीहरुसँग जोडिन पाउँदा म उत्साहित थिएँ ।
मलाई सधै यस्तो लागिरह्यो कि, मैले यो काम गरेर ठिक गरें वा बेठिक ?
किनभने हस्तमैथुन गर्ने वा पोर्नको लातमा परेकाहरुले पनि आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर राखेकै छन् । तर मलाई तब आश्चर्य भयो कि, दुनियामा म जस्तै हस्तमैथुन र पोर्नको प्रभावबाट नकारात्मक असर झेल्नेहरु पनि बग्रेल्ती छन् ।
नोफाप मुभमेन्ट बर्ष २०११ को सुरुमा भएको थियो, जब एक रेडिट युजर एलेक्जेन्डर रोड्सने हस्तमैथुन नगर्दाको फाइदासँग सम्बन्धित एक पोस्ट शेयर गरेका थिए । त्यो भाइरल भएको थियो ।
आज त्यस पोस्टसँग तीन लाख युवा जोडिएका छन् । एलेक्जेन्डरले यस्ता व्यक्तिहरुका लागि एक वेबसाइट पनि बनाएका छन्, जहाँ यस्ता व्यक्तिहरुको अनुभव समेटिएको छ ।
कुनै रिलेसनसिपमा छैन
मेरो लागि यो अभियान आत्माविश्वास, शान्त दिमाग र प्रेरित गर्ने खालको छ ।
यस्तो अवस्थामा म कुनैपनि युवतीसँग कुराकानी गर्नमा आत्माविश्वासी छु, किनभने मैले आफुलाई काबुमा राखिसकेको छु । मैले बितेको १० बर्षदेखि हस्तमैथुन र पोर्न सामाग्री हेर्नबाट मुक्त राखेको छु । पहिलो हप्ता केही समस्या हुनसक्छ ।
म कुनै टिभी वा युट्युबमा आकर्षक महिला देख्नसाथ आकषिर्त हुन्थें । कहिले कहि कुनै युवतीले मलाई रिजेक्ट गरिदिन्थे, तब म आफैलाई खुसी राख्नका लागि हस्तमैथुन गर्थे ।
तर, जब मैले यो सिलसिला टुंग्याएँ, केहि दिनका लागि त नरमाइलो लाग्यो ।
यस पटक मैले ठूलो प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेपछि हस्तमैथुन गरें । म कुनै रिलेसनसिपमा छैन । मेरा साथी बाहिर थिएँ । म एक्लो थिएँ । त्यो कमजोरीको घडी थियो ।
यति लामो समयसम्म हस्तमैथुन नगर्दा मलाई आफ्नो काममा केन्दि्रत हुन सहयोग पुग्यो । अहिले म आफ्नो कोठामा कम्प्युटरमा घण्टौसम्म काम गर्न सक्छु । तर हस्तमैथुनले मेरो ध्यान भंग गर्दैन । त्यसतर्फ मेरो ध्यान नै जाँदैन ।
अब फेरी म एक पटक हस्तमैथुन नगर्ने अभियानमा संलग्न हुँदैछु ।
तर, चिकित्सकले भने हस्तमैथुनको सन्दर्भमा फरक तर्क गरेका छन्
एक चर्चित यौनविज्ञ डाक्टर भन्छन्, ‘मैले करिब ५० हजार रोगी देखिसकेको छु । र, हस्तमैथुनको सम्बन्धमा मेरो केही भ्रम बाँकी छैन । हस्तमैथुनको प्रक्रिया सेक्सकै जस्तो छ । दुबैमा एकै काम हुन्छ । यस्तोमा यो एकदमै नाजायज कुरा हो कि, यसले शरीरलाई कुनै हानी गर्छ ।’
जबकी हस्तमैथुनको सम्बन्धमा भनिन्छ, धेरै हस्तमैथुन गर्दा शारीरिक रुपले केहि समस्या हुनसक्छ ।
डाक्टरको तर्क छ, ‘धेरै बोल्दैमा तपाईको आवाजको शक्ति नष्ट हुँदैन । निजी अंगको हकमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ ।’
हस्तमैथुनको सन्दर्भमा यो पनि भनिन्छ, कि हस्तमैथुन गर्नु हुँदैन
तर, डाक्टर भन्छन्, ‘हस्तमैथुन गर्दा यौनाङ्गलाई हानी हुने होइन । जसरी हामी केहि महिनासम्म एकै ठाउँ बसेपछि केहि दुरी छिचोल्दा खुट्टा दुख्न सक्छ । त्यसैगरी यौनाङ्गलाई पनि प्रयोगहिन बनाउँदा बरु त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’
उनले के कुरामा पनि जोड दिएका छन् भने, आर्युवेद वा कामशास्त्रमा पनि लेखिएको छैन कि हस्तमैथुन खराब हो ।
किन यौ’नसम्पर्क राख्नेवित्तिकै पुरुषलाई निन्द्रा लाग्छ ?
इरानमा पनि नेपालमा जस्तै मिल्दोजुल्दो संस्कृती !